sell android app on google play market from myanmar - MYSTERY ZILLION
sell android app on google play market from myanmar
April 2013 edited April 2013 in Android Development
google ကနေ မြန်မာပြည်အတွက် google play market ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ မြန်မာပြည် ကနေ google play market တွင် android app တွေကို ၀ယ်လို့ ရောင်းလို့ ရပြီလားသိချင်လို့ပါ။developer တွေအတွက် android app တွေကိုမြန်မာပြည်ကနေရောင်းချင်ရင်ကောအဆင်ပြေပြီလားလို့သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Paid App ကနိုင်ငံတိုင်းရောင်းလို့မရဘူး အောက်ကစာရင်းထဲမှာ ပါတဲ့နိုင်ငံတွေပဲ ရောင်းလို့ပါတယ်။
Free App Distribute လုပ်ချင်ရင်တော့ရလိမ့်မယ် Developer Registration အတွက် Registration Fees 25$ ပေးရမယ်။
free app ကို in-app-purchase နဲ့လည်းမရဘူးလို့ဆိုတာလားမသိဘူး အစ်ကို။ ပြီးရင် developer registration အတွက်ကကော international bank acc ပဲလားဗျာ။ ကျွှန်တော်က မြန်မာပြည်ကိုချစ်တာဆိုတော့ မြန်မာပြည်မှာရော android အတွက် developer acc ဆောက်လို့မရလောက်ဘူးလားမသိဘူးနော်အစ်ကို။
In-app လည်း Paid ပဲလေ ငွေပါတာနဲ့ Google ကကိုယ့်ကို် ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတာ ပါလာတာပဲ စာရင်းထဲပါတဲ့ နိုင်ငံတွေကိုပဲသူတို့ ပေးလို့ရနိုင်သေးတယ်။ Registration က Google Checkout နဲ့ပေးတာဆိုတော့ Checkout က Master, Visa, American Express လိုကဒ်တွေလက်ခံတယ် အဲဒါတစ်ခုခုရှိရင် Register လုပ်လို့ရပါတယ်။
Paid နဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို google checkout နဲ့ ချိတ်ရပါတယ်။ checkout အတွက်က online မှာသုံးလို့ရတဲ့ master, visa စတာတွေရှိမှ ဖြစ်ပါတယ်။ Free App တွေကိုတော့ VPN ကနေ တဆင့်ဝင်ပြီး upload တင်ရင်တော့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Developer Registration အတွက် US$ 25 ပေးရပါမယ်။
admob လေးသုံးချင်တာ မြန်မာပြည်ကနေ ဆိုရင်ကော အဆင်ပြေမလားခင်ဗျ...swift code မရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိလို့ပါ
I want to upload my apps to google play, but i can't.I have no Visa,Master...so can i try with Virtual Visa?How can i pay to google to US 25$ from myanmar...
Andthen, from myanmar when i upload the app to google play isalittle in difficult bcz google do not allowed Google Developer Console from accessing Myanmar. So If i want to upload app to Play Store, i have to pass proxy, often uploading to play store take4to5man hour...plz tell to google ...plz...:(
မြန်မာပြည်မှာ CB bank မှာ Master or Visa ရပြီလို့ကြားပါတယ် အဲတာဆိုရင်ကော အဆင်ပြေပြီလားမသိဘူးခင်ဗျ...တစ်ချက်လောက်အကြောင်းပြန်ပေးကြပါ
@shanlinhtet‌ , https://support.google.com/googleplay/android-developer/table/3539140?rd=1 Google Play still not support Myanmar for Developer Registration and Merchant Registration.
So, you can't sell from Myanmar.
Thanked by2kaungkhantmintun shanlinhtet
free လေးတင်ချင်ရင််တောင် မရဘူးပေါ့နော် ..
@သီရိ Google Play Developer is only one-time fee, but need to pay even you want to develop the free app.